Be dia be ny fotoana laniny miresaka momba ny fiakaran'ny vidin-tsolika na tsia, izany dia noho ny fitadiavan'ireo olona ny "mora" ny vola'na' onja vaovao 'hiditra. Ny tsenan'ny fampiroboroboana dia tokony ho raisina ho toy ny bonus izay tonga manodidina ny dimy na fito taona - mikasa ny hahazo anao ny vola amin'ny fomba izay azonao sy azonao averimberina.
Hahavita tsy tapaka ianao ny vola raha manome ny tolotra maimaim-poana tsara indrindra ianao ary lasa olan'ny solosaina ao amin'ny indostrian'ny trano. Te ho tsara indrindra; manofana ireo toetra tsara indrindra sy madio indrindra, mitodika ireo mpikarakara sy manamarina fa mahitsy be indray mandeha isam-bolana izy ireo, ary miezaha hijery azy fa tsy miafina amin'ny mpikarakara anao - mifandraisa aminy na dia mandeha tsara aza ny zava-drehetra ary ho hitanao fa raha fantatr'izy ireo fa hiantso ianao (na olona iray amin'ny anaranao) dia tsy hahatsapa izy ireo fa ilaina ny miantso anao amin'ny zavatra madinika.
Manàna fieboeboana amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny fananana, mamintina ny tsipiriany madinika izay tsy dia lafo loatra fa ataovy ny fahasamihafana rehetra; Mankanesa any am-piandohan 'ny fiheverana, azafady ny varavarana dia misokatra ary manana ny fanalahidy havanana ianao, alaivo ny mailaka madinidinika rehetra, ataovy izay hahamora ny zavatra rehetra, esory ny tsimparifary, avelao ny rivotra madio hiditra ao amin'ilay trano raha efa nisy tsy misy vidiny, vita asa vita DIY kely vita - dia soso-kevitra iray ihany ny fananganana izay mampiseho anao fiahiana. Raha mikarakara ny mpanjifanao ianao dia hihaino ny soso-kevitrao ry zareo mihoatra noho ny hoe tsy mikarakara azy.
Mikaroha amin'ny fametrahana olana amin'ny famahana ny olana rehefa mividy na mivarotra ianao. Ny olom-barotra dia olan'ny fiaraha-miasa raha tsy izany dia ampiasaina amin'izany, ianao dia omena fahafahana hanao ny vola amin'ny famahana izay heverin'ny hafa ho olana tsy azony atao na tsy hamaha ny tenany. Mianara mankafy ny mahita ireo olana amin'ny fifanarahana ary mametraka vidiny amin'ny famahana azy ireo, izany dia mety ho fihenam-bidy amin'ny vidin'ny fividianana, ny fisavana avo lenta, ny fivarotana avo lenta na ny vola lany - na inona na inona ataon'ireo tsena dia ho ataonao foana ny vola.
"Mandehana ny kilaometatra fanampiny"